ဆန်တိုဟူးသုပ် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
စားထုံး..အနည်းငယ်ကို ရေတစ်ခွက် ( လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး) နဲ.ရေဖျော်ပြီး..အနည်ထိုင်အောင်ထားပါ။
ဆန်ကြမ်းမှုန်.( ကောင်းစွာညှက်သော) ၂ ခွက်ကိုရေဖျော်ပြီး( အထုံးလေးများ
မရှိစေရ ) အိုးတစ်လုံးမှာထည့်ကျိုပါ ။
သမအောင်မွှေပါ ( မီးမပြင်းစေရ ၊ တစ်ဖက်တည်း ကိုပဲမွှေပေးပါ ။)
လင်ဗန်း (သို.) ခွက် တစ်ခုထဲမှာလောင်းချပြီးအအေးခံထားပါ။
ထန်းညှက်ကို ရေအနည်းငယ်နှင့် ခပ်ပျစ်ပျစ်ကြိုပါ။ ပဲငံပြာရည်အပျစ်အနည်း
ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက်( နနွင်းမပါ ) ကျက်ခါနီးမှာ ထောင်းထားတဲ့နှမ်းလှော်
မုန်.ပွဲပြင်ပြီဆို..ဆန်တိုဟူးကိုမိမိနှစ်သက်တဲ့ပုံစံလှီး..ကြက်သွန်ဖြူ + နှမ်း
ဆီချက် ၊ ပဲငံပြာရည် ၊ ထန်းညှက်ရည် ၊ ချင်းစိမ်ထားတဲ့ရှလကာရည် ၊ ကြက်
သွန်နီကြော် ၊ နံနံပင် ၊ မြေပဲထောင်းတို.ထည့်ပြီး..ချို ၊ ချဉ် ၊ငံ ၊ စပ်လေး
အရသာလိုအပ်ပါက ဆား ၊ ဟင်းခတ်မှုန်.အနည်းငယ်ဖြည့်စွက်ပါ။